Huanglong, madziva ane mavara uye World Heritage | Kufamba Nhau
Huanglong, emadziva ane mavara uye World Heritage
Mariela Carril | | China, Chii chekuona
China ine nzvimbo zhinji dzakaziviswa neUNESCO Nhaka Yenyika uye chimwe chazvo ndicho chaunoona mumufananidzo: nzvimbo ine mavara uye inoshamisa inonzi Huanglong. Kana iwe uchida kuziva China uye wopfuura Beijing, Shanghay neHong Kong saka nhanho dzako dzinofanira kukuendesa kuSichuan.
Haisi nzvimbo yakasununguka kana yepedyo asi pakati perwendo nenzvimbo dzinozokutambira iwe paunosvika, pasina mubvunzo chichava chiitiko chikuru muhupenyu hwako. Yakave iri World Heritage Saiti kubvira 1992 uye unofanirwa kuzviona iwe pachako kuti uone kuti sei.
Huanglong Historic uye Scenic Inofarira Nzvimbo
Sezvandataura pamusoro iri mu sichuan, mukati memakomo eMinshan, anenge makiromita mazana matatu kubva kuguta reSichuan Chengdu, uye makiromita 144 kumaodzanyemba kweJiuzhaigou. Nekudaro, iri chikamu cheHuanglong Scenic Reserve uye paki yenyika yezita rimwe chete.
Iwo mafoto anokuratidza saiti inoita senge chimwe chinhu kubva mungano. Nyeredzi mupata, kudana Yero Dhiragoni Gorge, iyo inofamba anopfuura anopfuura matatu nehafu makiromita uye iyo kubva kure yakafanana nedragoni yegoridhe inotadza. Uye ndeyekuti kune madhipatimendi eacalbonated calcium, akaturikidzana akati wandei, ese kuburikidza nemasango uye echando pamupata. Yakaumbwa madziva pakukwirira kwakasiyana uye kune mapopoma anoasanganisa.
Rwendo rukuru rwemadziva egoridhe uye mapopoma anotangira kune yekare tembere yechiBhudha iyo iri kumusoro mumupata uye inogumira padziva rakanaka rinonzi Padzi revashanyi. Mavara enzvimbo anosiyana zvinoenderana nenguva yegore asiwo maumbirwo nekuti madhibhi akakura kana madiki kana kunyangwe emumvuri wakasiyana pakati peyero, shava, bhuruu uye girini zvichienderana nekuti kunopisa kana kutonhora.
Iyo geology yenzvimbo iyi yakaumbwa pamusoro pemazana emakore. Mineral deposits yakanyura muvhu ndokugadzira izvi masango anopisa echirimo anopisa dzakadzika dzakasiyana. Mvura inotsvedza kubva kune imwe ichienda kune imwe uye yakatochera mapako mumupata wese. Kune zvakare misoro kumativi ese erukova uye rwizi rwumwe chete urwo rwunoyerera pakati pemadziva uye munzira yarwo harumboregi kuyeuchidza vashanyi nei saiti iyi ichinzi Quebrada del Dragon Amarillo.
Kune rimwe divi, chikamu ichi che China chiri kumba kune akawanda marudzi, pakati pavo iyo Giant Panda uye iyo Golden Monkey. Hakusi kuti uri kuenda kunoona mhuka idzi zvechokwadi asi dzinogara pano uye izvo zvinowedzera kukosha kumatunhu. Izvo hazvisi zve madziva chete, nzvimbo yacho ine nzvimbo zhinji dzakanaka: kune imwe chete 14 metres yakakwira mapopoma emvura, mapako, matunduru, tembere uye mazhinji madziva emadziva nemazita emhando yepamusoro. Dzese dzakambundirwa nekusingaperi machena machena ari pakati pe1700 metres uye 5588 metres mudenga, mazaya echando zvaisanganisira. Nzvimbo yese ine mahekita zviuru zviuru makumi matanhatu.
Nhasi hurumende yakavaka 4.2-kilomita nzira yematanda iyo inomhanya ichitevedza ivhukana travertine uye izvo zvinobvumidza vashanyi kuikoshesa mukufamba kwemaawa mana. Zvakare, mumwaka wakakwira pane cableway.
Unosvika sei kukona iyi yeChina? Zvakanaka iwe tora chitima kana bhazi muBeijing kuenda newe kuChengdu. Kubva kuJiuzhaigou Chiteshi muguta rino unotora bhazi kuenda kuHuanglong National Park. Nguva yekutanga yekusiya bhazi iri na7 am, zvinotora maawa matatu nehafu, uye inodzokera kuguta na3, 3:30 pm. Izvo zvakakosha kuti utarise iwo marongero.
Kune mamwezve mabhazi anobatanidza Chengdu neHuanglong Airport uye kana zvisiri iwe unogona kutora a tekisi. Verengai rwendo rwacho mumaawa mana kubva kuJiuzhaigou. Unogona kugara uchinyorera iyo kushanya, inonyanya kufarirwa ndeyekushanya kwemazuva manomwe kunopfuura nemuJiuzhaigou neChengdu uye kazhinji kunosanganisira rwendo rwekufamba-famba kuenda kuSongpan, iri mamaira angangoita makumi matatu nemashanu.
Kupinda kwepaki kunodhura madhora makumi matatu pamunhu mukuru mumwaka wepamusoro uye zvakanyanya kushomeka, madhora gumi, mumwaka wakaderera. Peak mwaka inogara pakati paApril 10 naNovember 1 uye paki yakavhurwa kubva 15am kusvika 8 pm. Mwedzi yakanakisa yekushanyira, inotonhora zvakanyanya, ndiJune Chikunguru uye kupera, zvisinei iyo ocher uye yegoridhe mavara ematsutso akanaka nekuti anoratidzwa mune iwo mazana emadziva nenzira yakasarudzika.
Zviripachena, nguva yechando ine zvakare hunyengeri sezvo paine sinou kwese kwese kunze kwemadziva emvura anopisa saka unogona kufungidzira kutamba kwemavara. Kunze kwekunge iyo nzvimbo yakagwamba nechando, ndiko kutora yakanakisa mifananidzo. Sezvaungafungidzira, mwedzi inotonhora zvikuru ndiChikunguru naNyamavhuvhu, panguva iyo tembiricha inenge yakatenderedza 16ºC. Ukaenda kubva Zvita kusvika Kukadzi tembiricha iri 1ºC kana zvishoma. Mwaka wemvura unobva muna Chivabvu kusvika Nyamavhuvhu uye pano mangwanani nemanheru zvine fog. Rangarira kuti mupata uye izvo tembiricha inogara ichisiyana.
Paunoronga kushanya, edza kuronga zvese kuti utange kare chaizvo nekuti paki inokutora iwe zuva rese. Iyo nzira yekufamba nzira yandakakuudza nezvayo isati yamhanya makiromita mana kukwira kumusoro uye ipapo unogona kutora nzira yekuita kumashure. Zvinokurudzirwa kuunza chikafu, shangu dzakanaka, mvura uye chimwe chinhu chinodzosera mvura. Kune nzvimbo yezvitoro uye yekugezera, nerombo rakanaka, asi iwe unofanirwa kuunza yako wega kuti usabhadhara zvakanyanya uye ehe, chimbuzi pepa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » famba » Chii chekuona » Huanglong, emadziva ane mavara uye World Heritage
Ronga rwendo rukuru kuMalta
Iyo Cathedral yeJusto muMejorada del Campo, Asset yeCultural Inofarira?